क्यालोरी ५३४ प्रति १०० ग्राम
बोसो ( ४२.१६% ), संतृप्त बोसो ४.३%
ओमेगा-३ एल्फा लिनोलेनिक एसिड १८.१%
भिटामिन थायमिन, भिटामिन बी-५, बी-६, बी-१२ र बी-१७, फोलेट, नायसिन, राइबोफ्लेबिन र भिटामिन सी
खनिज क्याल्शियम, ताँबा, फलाम, मैंग्नेशियम, मैंगनिज, फाँसफोरस, पोटाशियम, सेलेनियम र जिंक
एण्टी आँक्सीडेन्ट लिगनेन, लाइकोपिन, ल्यूटिन, जियाजेन्थीन
ओमेगा-३ ले कोशिकाहरु को भित्ता लाइ नरम र लचिलो बनाउँछ भने ओमेगा-६ ले कठोर र कुरुप बनाउँछ। हाम्रो शरिर लाई ठीक प्रकार ले संचालन गर्न ओमेगा-३ र ओमेगा-६ दुबै बराबर १:१ मात्रा मा चाहिन्छ। ओमेगा-३ नायक हो बने ओमेगा-६ खलनायक हो। ओमेगा-६ को मात्रा धेरै भएमा शरिर मा इन्फ्लेमेशन फैलिन्छ भने ओमेगा-३ ले इन्फ्लेमेशन लाई ठिक गर्दछ। ओमेगा-६ ले ताप बढाउँछ भने ओमेगा-३ ले शितलता दिन्छ। ओमेगा-६ ले मानसिक तनाव, डिप्रेशन को शिकार बनाउँछ भने ओमेगा-३ ले मन लाई प्रसन्न राख्छ, क्रोध लाई हटाउँछ, स्मरण शक्ति एवं बुद्धिमत्ता बढांउछ। ओमेगा-६ ले आयु कम गर्दछ भने ओमेगा-३ ले आयु बढांउछ। ओमेगा-६ ले शरिर मा रोग उत्पन्न गरांउछ भने ओमेगा-३ ले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढांउछ। बजार मा पाईने फस्ट फूड तथा जंक फूड हरु मा ओमेगा-६ प्रशस्त मात्रा मा पाईन्छ साथै बजार मा पाईने सबै रिफाईण्ड तेल मा पनि ओमेगा-६ फ्याटी एसिड धेरै मात्रा मा हुन्छ। हालै भएको अनुसंधान ले हाम्रो भोजन मा ओमेगा-३ को मात्रा कम र ओमेगा-६ को मात्रा धेरै भएको कारण ले हामी लाई उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, मधुमेह, मोटोपना, दम, वाथ, कैंसर आदी रोगहरु लागेको हो भन्ने पत्ता लागेको छ। ओमेगा-३ को कमी लाई आलस ३० देखी ६० ग्राम सम्म दैनिक खाएर सजिलै पुरा गर्न सकिन्छ। यही ओमेगा-३ ले नै आलस लाई ‘सुपर स्टार फूड’ को दर्जा दिलाएको हो।
कैंसर विरोधी लिगनेन को प्राकृतिक स्रोत:- आलस मा अर्को महत्वपूर्ण पैष्टिक तत्व लिगनेन हो। आलस, लिगनेन को सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो। आलस मा लिगनेन को मात्रा अन्य खाद्यान्न मा भन्दा सयौं गुणा धेरै हुन्छ। लिगनेन एण्टि-बैक्टिरियल, एण्टि-वायरल, एण्टि-फंगल र कैंसर विरोधी हुन्छ। साथै यसले रोग प्रतिरोधक क्षमता पनी बढांउछ । लिगनेन ले कोलेस्ट्रोल लाई घटाउंछ र ब्लड सुगर लाई नियन्त्रित राख्दछ। लिगनेन एक सुपर स्टार पोषक तत्व हो। महिलाहरु मा रजोनिवृत्ति पछी ईस्ट्रोजन श्राव को मात्रा कम हुनजान्छ र महिलाहरु मा धेरै समस्याहरु जस्तै- हट फ्लशेज, ओस्टियोपोरोसिस (हड्डी को समस्या)आदी देखा पर्दछ। लिगनेन ले यी सबै समस्या हरु मा फाईदा गर्दछ। लिगनेन ले मासिक धर्म सम्बन्धी अनियमितताहरु लाई ठिक गर्दछ। लिगनेन ले प्रोस्टेट, गर्भाशय, स्तन, आमाशय, छाला आदी को कैंसर बाट रक्षा गर्दछ। यदि आमा को स्तन बाट दूध आउँदैन भने आलस मा २४ घन्टा भित्र स्तन मा दूध आउँछ। यदि आमा ले गर्भावस्था मा आलस सेवन गरेमा बच्चा ले पर्याप्त मात्रामा ओमेगा-३ प्राप्त गर्दछ र बच्चा धेरै बुद्धिमान एवं स्वस्थ्य जन्मन्छ। अमेरिका मा भएको अनुसंधानबाट आलस मा २७ भन्दा बढी कैंसर विरोधी तत्वहरु पाईएको छ। एड्स रिसर्च असिसटेंस इंस्टिच्यूट ( ARAI ) ले सन् २००२ देखी एड्स को रोगीहरु मा लिगनेन को प्रभाव बारे अनुसंधान गरिरहेको छ र आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त भएको छ। भविष्यमा चांडै नै लिगनेन एड्स को सस्तो, सरल र प्रभावशाली उपचार साबित हुने छ।
शरिरीक सुगठन मा आलस को प्रयोग:- आलस बडी बिल्डर्स को लागी आवश्यक एवं सम्पूर्ण आहार हो। आलस मा २०% एमिनो एसिड युक्त राम्रो प्रोटिन हुन्छ। प्रोटिन ले नै मांसपेशिहरु लाई बढाउँछ। आलस ले धेरै शक्ती दिन्छ। कसरत पछि मांसपेशि को थकावट लाई क्षणभर मा नै ठिक गरिदिन्छ। बडी बिल्डिंग पत्रिका मसल मिडिया २००० मा प्रकाशित लेख ‘बेस्ट आँफ द बेस्ट’ मा आलस लाई शरिर को लागी सुपर फुड भनिएको छ। आलस ले हाम्रो शरिर लाई धेरै शक्ती दिएर नयाँ उर्जा को प्रवाह गर्दछ र स्टामिना बढाउँछ।
हामी ले प्रत्येक दिन ३० देखी ६० ग्राम आलस खानु पर्दछ। यसको धुलो बनाएर आँटा मा मिसाएर रोटी बनाएर, तरकारी मा हालेर, अचार बनाएर वा दाल मा हालेर पनी खान सक्छौं। आलस को नियमित सेवन ले ब्यक्ती को जिवन मा चमत्कारी कायाकल्प हुन्छ। यो बच्चा देखी बृद्ध सम्म को लागी उपयोगी छ।
आलस को तेल खाने तरिका:- आलसको तेल ४५ एम.एल., ताजा पनिर ९० एम.एल. र फलफुलको मिश्रण लाई मिक्सचर मा राखी केहीबेर फिटनु पर्छ। जसमा तेल र पनिर क्रिम जस्तो हुनु पर्दछ। तेल र पनिर अलग देखिनु हुन्न। यदी पनिर र तेल फिटिएन भने थोरै दूध मिसाएर फिटनु पर्दछ र त्यस मिश्रण मा आलस को धुलो २ ठुलो चम्चा मिसाएर खानु पर्दछ। पनिर बनाउन को लागी गाई वा बाख्रा को दूध उत्तम हुन्छ । यसमा दही को पनिर पनी प्रयोग गर्न सकिन्छ । दही लाई चलाए पछी पानी फुट्छ र त्यसलाई झुना कपडामा छानेपछी निस्किएको छोक्रा लाई पनिर को रुपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
हामीले नास्ता मा आलस को तेल र पनिर को मिश्रण नियमित सेबन गर्यौ भने स्वस्थ्य, फुर्तिलो र चिन्ता रहित जिवन जिउन सक्दछौं ।
आलस को सेवनले के कस्तो फाइदा पाउन सकिन्छ? जान्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नु होस।
आलस को बारेमा बिस्तृत जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नु होस।
Dr. O.P.Verma January 06, 2012
अलसी की चेतना फैलाये जाओ।
सुनिल शेखर January 07, 2012
Thank you Dr. Verma for visit the blog.